DAAWO Habka dumarka barida weyn loo foorariyo waa ku ooyaan nuucaan | Gaaloos.com
Home » galmada » DAAWO Habka dumarka barida weyn loo foorariyo waa ku ooyaan nuucaan
DAAWO Habka dumarka barida weyn loo foorariyo waa ku ooyaan nuucaan
Maxaa jecleeysiiyay raga dabad dumarka, naagaha dabada weyn leh aad baa looga helaa, taas maxaa sabab u ah, runtii ninka markuu arko dabo weyn ruxanayso wuu damcaa, naagaha garbaha waaweyn leh waxay leeyihiin futo weyn.
Sidoo kale naagta gadaal u weyn, maxay ku haboon tahay, galmada foorarka ninka marka uu foorariyo gabadha gadaal ama dambeedka u weyn raaxo badan ayuu ka helayaa galmadaas, marka si fiican uu u ruxo waxay keenaysaa kuuntada naagta dhawaaq oo ka imaanaya marka labada bari ay is garaacayaa, dhuuso ha u malaynin.
Badhida weyn marka ay ku dhcdo mida kale dhaq dhaq bay oranaysaa, marka ay soconayso dabada weyn si fiican ayay u ruxanaysaa, galmada naagaha sidaas ah raaxo badan waaali ah ayay leedahay, naagaha jareerta ayaa la dhahaa waa naagaha ugu dabada weyn oo raaxada badan leh.
Buufis ayaa laga dareemaa inay soo kuusan tahay oo ay soo taagan tahay sida naaska oo kale, hadaba haddii aad rabto naag raaxo badan aad ka heli karto yayna kaa fakan gabar buuran oo gadaal u balaaran oo raaxo leh, bas waxay kaaga baahan tahay gus weyn oo dheer.
Waayo marka ay foorarsato siilkeeda aad buu uga foghahay guska ninka, badhida ayaa soo dheer iyada ayaa kaa reebayso, markaad gelinayso geedkaaga ama malabyarowga, siilka wuxuu leeyahay faruuro buuran, oo macaan badan dhuuqid ku fiican, bas naagaha noocaas ah shiirkooda ayaa badan, shiir badan ayaa jirkooda ka soo baxo.
haklaan ka daawo muukhaalka
Title: DAAWO Habka dumarka barida weyn loo foorariyo waa ku ooyaan nuucaan